ကလေးဝမြို့တွင် မိုးရက်ဆက် ရွာသွန်းနေသောကြောင့် အနိမ့်ပိုင်းနေရာများ ရေဝင်ရောက်နေ၍ သတိပြု? - Yangon Media Group
ကလေးဝ၊ သြဂုတ် ၇
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းတွင် သြဂုတ်လဆန်းရက်ပိုင်းမှ အစပြု၍ မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဟုမ္မလင်း၊ ဖောင်း ပြင်၊ မော်လိုက်နှင့်ကလေးဝမြို့များတွင် ချင်းတွင်းမြစ်ရေစိုးရိမ်ရေ မှတ်ဝန်းကျင်သို့ရောက်ရှိနေပြီးအနိမ့်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများမြစ် ရေများစတင်ဝင်ရောက်လာသည့်အတွက် ဒေသခံများအထူးသတိပြု နေထိုင်ကြရန် ကလေးခရိုင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
”သြဂုတ် ၆ ရက် ကလေးဝမြို့ ချင်းတွင်းမြစ်သာပေါင်းဆုံရာနေရာမှာ မြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်နေပြီး အနိမ့်ပိုင်းနေရာ တွေကိုရေစတင်ဝင်ရောက်နေတယ်။ စိုးရိမ်ရေမှတ်အောက်တစ် ပေကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင်လာမယ့် နှစ်ရက်အတွင်းစိုးရိမ်ရေမှတ်ကို ကျော်လွန်လာနိုင်တယ်။ အခုချိန်ခါမှာတော့ ချင်းတွင်းမြစ်သာမြစ်တွင်း စုန်ဆန်သွားလာနေတဲ့ရေယာဉ်တွေ မြစ် ကမ်းနားမှာနေကြသူတွေ အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လို အပ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောကြားသည်။
ကလေးဝမြို့ချင်းတွင်းမြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ်မှာ စင်တီမီတာ ၁၅၅ဝ ဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လ ၆ ရက်၊ နံနက် ၆ နာရီတိုင်းတာချက်များအရ ချင်းတွင်း မြစ်ရေသည် ၁၅၁၆ စင်တီမီတာသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း ကလေးခရိုင်မိုးဇလဌာနမှ ထုတ် ပြန်ထားသည်။ ကလေးခရိုင်မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာန၏ သတင်းထုတ် ပြန်ချက်အရချင်းတွင်းအထက်ပိုင်းဒေသနှင့် ကလေးဒေသတို့တွင် သြဂုတ်လဆန်းမှလာမည့် သြဂုတ်လ ၁ဝ ရက်အထိရက်ဆက်မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီး ချင်းတွင်းမြစ်ရိုးတစ် လျှောက်ရှိ မြို့ရွာများအားလုံး စိုးရိမ် ရေမှတ်များသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်အတွက် အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြရန် သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
သောင်ရင်းမြစ်ရေ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်တက်မှုကြောင့် မြေနိမ့်ပိုင်း ရပ်ကွက်များမှ ပြည်သူများကို ??
သွင်းကုန်အခွန် တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည်ဟု အမေရိကန်နှင့် တရုတ် အပြန်အလှန်ကြေညာ